आफैँले जनता जनता वीच लडाइँ गराएर, जनता मारेर, मर्न उक्साएर आफैँले ल्याएको व्यवस्था फेरि अन्त्य गर्नका लागि आफैँ फेरि जनता वीच लडाइँ गराएर फेरि पनि जनतालाई नै मारेर तिनै नेताले आफैँ ल्याएको व्यवस्था खराब हो |
आइतवार, अशोज १०, २०७८ ९:०७
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। आफैँले जनता जनता वीच लडाइँ गराएर, जनता मारेर, मर्न उक्साएर आफैँले ल्याएको व्यवस्था फेरि अन्त्य गर्नका लागि आफैँ फेरि जनता वीच लडाइँ गराएर फेरि पनि जनतालाई नै मारेर तिनै नेताले आफैँ ल्याएको व्यवस्था खराब हो | ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
त्यो अन्त्य गर्नु पर्छ भन्दै पटक पटक जनता मारिरहने र आफूले ल्याएको व्यवस्था नै फेरि खराब भनेकोमा पहिला चाहिँ गल्ती भएको रहेछ माफी चाहन्छाँै भनेर एक पटक पनि गल्ती स्वीकार चाहिँ नगर्ने यस्ता नेताहरु भएको मुलुक नेपाल बाहेक संसारमा कुनै छैन ।
माओत्सेतुङ्गले पनि ब्रोङ्गकाइटिस् भएर थलिएको बेला महाभुकम्पपछि ईश्वरलाई गाली गरेकोमा माफी मागेका थिए र अब ईश्वर बाहेक कसैले रक्षा गर्न सक्तैन भनेका थिए ।
तर, नेपालका नेताहरुले आफैँले मान्छे मारेर र मर्न उक्साएर ल्याएको व्यवस्था फेरि आफैँ गलत भनेर फेरि पनि आफैँले शुरु गरेको व्यवस्था फाल्न जनता उक्साउँदा गल्ती स्वीकारसम्म गरेनन् । अनि, हामी जनता चाहिँ उनीहरुले जे जे भने त्यही चुपचाप् अन्धभक्त बनेर स्वीकार गरेर बसिरह्यौँ ।
००७ सालको परिवर्तन पछिको व्यवस्था हामीले नेताको कारणले ठीक हो भन्यौँ, स्वीकार गर्यौँ । ०१७ सालको परिवर्तको विपक्षमा हामी उठ्यौँ नेताले भनेको मानिरह्यौँ । ०४६ सालको परिवर्तनमा पनि हाम्र्रै परिवारका मान्छेहरु मारिए नेताले उक्साएका कारण अनि अर्को व्यवस्था ल्यायौँ । त्यसलाई पनि नेताहरुले संसारको सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था भनिदिए ।
हामीले पत्याइरह्यौँ त्यसैका लागि जनता जनताले एक आपसलाई मारिरह्यौँ, मरिरह्यौँ । फेरि त्यो व्यवस्थाका विरुद्ध पनि त्यही व्यवस्था ल्याउने नेताले नै हामीलाई एक अर्कामा मर्न÷मार्न तयार गराए ।
हामी मरिरह्यौँ; परिवारका सदस्यहरु अनि एउटै परिवारका अरुलाई मारिरह्यौँ । आफैँले ल्याएको परिवर्तनलाई आफैँले मान्छे मार्न÷मर्न तयार गराएर नेताहरु आफैँले अस्वीकार गरिरहे ।
तर, सेना मात्र यस्तो शक्ति रह्यो जसले नेताले ल्याएका सबै व्यवस्थाहरु नेताहरुले नै केही समयपछि अस्वीकार गरे पनि सेनाले चाहिँ अस्वीकार गरेन । मानिरह्यो । र, व्यवस्थाको पक्षमा आफैँ अग्रसर भएर होइन सरकारले गरेको निर्णय अनुसार व्यवस्थाको विरोध गरेन ।
यो सामग्री पढिरहनु भएका हरेकले नोट गरेर राख्नु भएहुन्छ– नेपालमा नेपाली सेना रहेन भने नेपाल भन्ने देश रहँदैन कालान्तरमा । र, अहिले के पी शर्मा ओली र प्रचण्ड नेपाली सेनालाई विघटन गरेर सेना नै अन्त्य गर्ने दाउमा भारतीय गुप्तचर संस्था रअ सँग मिलेर काम गरिरहेका छन् । जसले सेना मात्र होइन, देश नै नरहने खतरा छ ।
प्रचण्ड अण्डरग्राउण्डबाट ओभरग्राउण्ड भएको बेला सबैभन्दा पहिला बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवासमा सार्वजनिक हुँदा नेपाली सेना नै चाहिँदैन, किन चाहियो ? चाहिए पनि २० हजारको संख्या भन्दा बढी चाहिँदैन भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
पछिल्लो पटक के पी ओली संयुक्त राष्ट्रसंघीय महाभेलामा भाग लिन गएका बेला त्यतात्यतै कोस्टारिका पुगेर त्यहाँ सेनाको विघटन कसरी गरियो भन्ने जानकारी लिएर आएका छन् । कोस्टारिकामा पनि नेपालमा जस्तै लामो आन्तरिक युद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको केही समयपछि सेनालाई विघटन गरिएको थियो ।
१९४२ सम्ममा शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएपछि सेना विघटन गरिएपछि त्यहाँ राम्रो भएको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यक्रम जनतासँग प्रधानमन्त्रीमा बनाउन लगाएर त्यसतर्फ मान्छेहरुलाई ध्यान तान्न योजना बनाएका छन् ।
उनैले आफ्नो कार्यक्रममा त्यो रिपोर्ट बनाउन लगाएर सेना विघटन गरिएपछि त्यहाँ राम्रो भएजस्तै नेपालमा पनि त्यस्तै गर्नु ठीक हुनेछ भन्ने जनमानसिकता तयार गर्ने उनको योजना हो ।
र, त्यसका लागि तयारीमा रहन सन्देश दिने उनको प्रयास हो । उनले कुनै पनि वाक्य योजना विना बोल्दैनन् । यो उनका सबै कर्मबाट देखिएको छ ।
नेपालमा सेना अन्त्य गर्न क्रिस्चियन मुलुकहरु, अमेरिकन लवीका देशहरु र युरोपियन युनियन अनि इण्डिया समेत लागेका छन् । सेना अन्त्य गरेपछि देश अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरुको सोचाइ हो ।
सेनामा हिन्दुत्व अडेको छ भन्ने पनि उनीहरुको भ्रम छ । तर, हिन्दुत्व न सेनामा अडिन्छ, न राष्ट्रपति वा कसैमा । हिन्दुत्व वा अन्य दर्शन व्यक्तिको व्यवहारमा मात्र बाँचेको हुन्छ । त्यो अर्कै विश्वलेषणको पक्ष हो ।
नेपाली सेना नेपाललाई चाहिन्न भन्ने विचार फैलाउन मिडियाहरु र मिडियाकर्मीहरु पनि परिचालित गरिएका छन् । उनीहले सेना किन चाहियो, के नेपाली इण्डियन वा चिनियाँ वा अन्त्य देशको सेनासँग लड्न सक्छ ? बरु सेनाका लागि खर्च हुने रकम कोस्टारिकामा जस्तो स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी गरिनुपर्छ भन्न थालेका छन् । उनीहरुलाई त्यसै भन्न परिचालित गरिएको छ ।
वास्तविकता के हो भने सेनाको संख्या कति छ त्यो महत्वपूर्ण कुरा हुँदैन युद्ध कौशल र विजय प्राप्त गर्नमा । एकदुई दर्जन मात्र सदस्य भएको एउटा असंगठित र गैरकानुनी समूहले पनि अमेरिकालाई आक्रमण गरेर पछार्न सक्छ ।
एक युद्धयोजक एक करोड सैनिकभन्दा छिटो विजेता बन्न सक्छ । एक युद्धवैज्ञानिक दर्जनाँै अमेरिकी, चिनिया वा इण्डियन सेनाभन्दा बढी खतरनाक र बलशाली हुनसक्छ ।
युद्धमा यी कुराहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् । यी पक्षहरु हाइपोथेटिकजस्तो लागे पनि एकदुई जनाले अमेरिकी ट्विन टावरमा हानेपछि विश्वशक्ति सन्तुलन खलबलिएको होइन ? इराकले एक्लै अमेरिकालाई बर्षौँ सम्म एक्लै रोकेको होइन ?
अर्कोतर्फ स्थलयुद्धबाट कुनै पनि मुलुकको भूमि जित्न वा कब्जा गर्न नपाइने महासन्धीहरु पश्चात सैनिक संख्या जतिभए पनि त्यससँग युद्ध गरेर स्थलगत रुपमा कब्जा गर्न नसकिने भएकोले हाम्रा ७४ हजारको संख्यामा सेना लड्डा लड्दै मर्ने हो भने संसारका अरु साना राष्ट्रहरु र साना राष्ट्रको पक्षमा हुने अन्य राष्ट्रहरु हेरेर मात्र बसिरहन्छन् होला ?
त्यति सेनालाई खत्तम गर्ने बेलासम्म विश्वको चित्र अर्कै भइसकेको हुनेछ । त्यो सानो संख्या होइन, एक दर्जन मात्र पनि ठूलो हो । सय भनेको झन् १० वटा १० ÷१० को समूह हो र त्यस्ता १००÷१०० को १० वटा समूह १ हजार हो । त्यस्ता हजार हजार झण्डै एक सय बटा समूह संसारको कुनै पनि अर्को सैन्य शक्तिले खत्तम गर्ने आँट बर्तमान विश्वमा हाम्रा राष्ट्रविरोधी कायरहरुले जसरी नसोचे हुन्छ ।
त्यसैले हाम्रो सेनाको संख्या सानो छैन न त यो देशले धान्न नसक्ने नै हो । त्यसैले भएको सेना विघटन गर्ने होइन, बरु उल्टो थोरै भए पनि नेपाल जोगाउन ट्रिवन टावरमा हान्नेजस्ता आत्मघाती राष्ट्रप्रेमी योद्धाहरु जन्माउन जरुरी छ ।
आत्मघाती राष्ट्रपे्रमी योद्धा अमेरिकी, चिनिया इण्डियन जस्ताका दर्जनौँ देशका सेना पनि डराउँछन्, परास्त हुन्छन् । त्यसैले त्यस्तो सेना बरु बनाउनु जरुरी छ । नेपाली जनतालाई झुक्याउने नेता पनि परास्त गर्नुछ । नेपाल सक्न प्रयास गर्ने सबैखाले देशविरोधीलाई परास्त गर्नु जरुरी छ ।
सेनामा भएको खर्च स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्नेहरुले यो भन्नुपर्छ कि आफ्नो कुनै जागीर नभएको, कुनै पेशा व्यवसाय र व्यापार नभएको खाली जीवनभर भाषण मात्र गर्दै हिँड्ने तर सबैभन्दा बढी सम्पत्ति उनीहरुकै हुने, हस्पिटलदेखि हाइड्रोसम्म, कलेजदेखि अन्य कम्पनीहरुसम्म शेयर हुने, कुनै कमाइको स्रोत नदेखिए पनि सबैभन्दा ठूला घर र राम्रा गाडी हुने नेताहरुको स्रोत नखुलेको सम्पत्रि राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने ४ वर्षको बजेट बन्छ ।
अन्य सबैको गर्ने हो भने १० वर्षको बजेट बन्छ । त्यो स्रोत नखुलेको सम्पत्ति चाहिँ राष्ट्रियकरण गरेर स्वास्थ्य र शिक्षामा लागनी गर्नुपर्छ सेना विघटन गर्ने होइन, विघटन गर्नुपर्छ भन्ने र योजना बनाउनेलाई देश जोगाउन आत्मघाती बनेर स्वदेशी विदेशी सबै नेपाल विरोधीलाई अन्त्य गर्नुपर्छ, देशको लागि यो स्थिति आइसकेको छ । यो सामग्री स्वागतनेपाल डटकमबाट साभार गरिएको हो ।